Ebube buru ibu na ihu - esi tufuo? Kedu ka esi kpoo oghere ihu na ihu na ụlọ na Ụlọ Mmanya ahụ?
Mma na ike Ihu ọma
Akwukwo na-ebuwanye ibu na ihu - ụzọ kachasị mma maka iwepụ ihe na-emerụ emerụ
Ụmụ nwanyị nwere akpụkpọ ahụ zuru oke dị na magazin ndị mara mma. Na ndu ndu, umuaka site na nwata ka ha ga-eche otutu nsogbu dermatological, gunyere uzo. Iji mezuo oke a, a na-emepụta ngwaahịa ịchọ mma na usoro ọgwụgwọ.
Pores gbatịworo - ihe kpatara ya
Ụdị nkwarụ a na-apụtakarị na mbido oge ọgbọ (oge uto). Isi ihe kpatara ya, bụ ebe e nwere nnukwu pores, bụ nke a na-ebute. Ihe ndị ọzọ kpatara nsogbu ahụ:
jikoro ma obu mmanu mmanu ;
ihe oriri na-edozi ahụ;
ezighị ezi ihu ihu na-ezighị ezi;
ngwọta nke usoro nhazi;
ịṅụbiga mmanya ókè;
nsogbu nke usoro ụjọ ahụ;
akpịrị ịkpọ nkụ nke anụ ahụ;
mgbanwe oge (karịsịa mgbe 30) gasịrị.
Ma ọ ga-ekwe omume iji warara pores?
A na-edozi nkwarụ ịchọ mma ahụ akọwapụtara dabere na ihe ndị na-akpalite ya. Ọ bụrụ na a na-emepụta pores dị ukwuu na ihu na-adabere na nkwenye, afọ, ma ọ bụ megide nzụlite nke abụba, jikọtara ụdị epidermis, ha agaghị emetụ ya aka. N'ọnọdụ ndị a, a ga-ewere ntụpọ ahụ dị ka akụkụ nke akpụkpọ ahụ ma zoo ya.
Mgbe pores gbasaa n'ihu na-apụta n'ihi ọrịa, àgwà ọjọọ ma ọ bụ nlekọta na-ekwesịghị ekwesị nke epidermis, ha nwere ike budata nke ọma. Iji mee nke a, ọ dị mkpa iji wepụ ihe kpatara nsogbu ahụ (ọgwụgwọ ọgwụgwọ, weghachite nguzo hormonal, wepụta ihe ndị ọzọ ịchọ mma). Na mgbakwunye, ị ga-agbanwe ndụ gị:
ịkwụsị ise siga;
nri ziri ezi;
aṅụ mmanya na-abaghị uru;
obere sunbathing na nleta na solarium.
Kedu ka esi kpoo ogwe aka n'ụlọ?
Iji belata oke nkwarụ ahụ, ị ​​nwere ike iji ngwaahịa ịchọ mma. Ihe na-egbuke egbuke na ihu na-enyere aka:
ndị ọkachamara na ndị ọrụ ụlọ;
Nkpuchi, kpochapu pores n'ulo
Nhọrọ kachasị mfe bụ ịzụta ihe ịchọ mma dị mma ma mee ka ọ dịrị na mpaghara nsogbu. Achọpụta ihe ruru eru, na-eme ka ọkpụkpụ dị mma, nwere ike ịhọrọ site na aha ndị a:
Nkpuchi Anya nke Magnaminty;
Ntughari nke kachasị na-arụ ọrụ;
Epieu Peat na-ehichapụ ihe mkpuchi di na nwunye;
Puta Pore Tightening BHA Pack;
Nkpuchi Demax Maka Na-atụgharị Pores;
Achọpụta Ngwá Ngwakọta Vitamin A.
Ụmụ nwanyị na-ahọrọ ihe kachasị mma, ihe a na-atụ aro ka ị kwadebe onwe gị. Enwere ntụziaka maka ihe nkpuchi 10 nkeji, nke gụnyere nanị otu ngwaahịa:
kpochapia pulp nke oroma;
kụrụ mkpụrụ osisi strawberries;
acha ọcha ọcha;
otu ogbe nke tomato.
Igwe ihu ihu igwe dị iche iche, na-ebelata ndị pores
nduku starch - 5-8 g;
nnu dị mma - 1 teaspoon na-enweghị ihe ngosi;
mmanụ aṅụ - 5-7 ml;
mmiri ara ehi dị ọkụ - 1 tsp.
Na-eme ihe niile dị iche iche ruo mgbe edo edo.
Tinye ngwakọta a dum na ihu na-ehicha ma kpoo.
Weghachite maka minit 25.
Sachaa ihe nkpuchi ahụ na-ekpo ọkụ, mgbe ahụ, na mmiri dị jụụ.
Tonic na-ebelata pores
Ụdị nlezianya na-ahụ maka nlekọta na-eme ka ahụ dị ọcha ma na-ehichasị akpụkpọ ahụ, na-enye aka belata nhụcha anya. Pores gbasaa ihu na ihu na-enyere aka dịka ụda mmiri ndị dị otú ahụ:
Ụwa Krehl nke dị ala;
Lumene Mat Touch;
Onye Isi Nzuzo Isi-Hazel;
Akwụsị nke ọma dị ọcha;
Usoro Mbibi Mediva;
Egwu Purie nke Totoque.
Onwe gị kwa, ị nwere ike ịkwadebe ihe ngwọta dị irè iji belata pores gbasaa n'ihu gị - otu esi wepu nhụjuanya a ga-enye ndị mmadụ ọgwụ. Ihe na-elekọta ndị mmadụ na-eme ngwa ngwa ma ghara njọ karịa ihe ịchọ mma ndị ọkachamara, ma ha dị ọnụ ala. Ihe ngwọta dị otú ahụ maka ịkụda mbara pores dị mfe maka ịmepụta ma chekwaa.
Ntuziaka Tonic nke Home
mmiri rose - 100 ml;
mkpa mmanụ rosemary - 5 tụlee;
nke a na-amịpụta simee - 100 tsp.
Gbanye ihe ndị dị na iko akpa dị ọcha.
Hichapụ ihu na ngwọta natara 2-3 ugboro n'ụbọchị.
Debe ngwaahịa ahụ n'ime friji.
Nri, na-ebelata ihe ndị ahụ
Nke a bụ ụdị ihe ịchọ mma ọzọ, na-eme ka ọ dị ọcha ma na-agbanye akpụkpọ ahụ. Tupu ichikota pores n'enyemaka nke ude, whey ma ọ bụ ọgwụgwọ ọzọ dị ike, ọ ka mma iji ụzọ nke mbụ mee ihe:
TonyMoly Abụ m Osisi Tea.
Ụlọ Nyocha Ụlọ Ụlọ Ọgwụ na Daily;
Paula's Choice 2% BHA Nri;
Achịcha ọchị nke Gimme Tonight.
Ntuziaka maka ude mmiri
chamomile okooko osisi - 10 g;
ụda linden - 10 g;
mmiri esi mmiri - 180 ml;
ọhụrụ site na lemon - 1 tbsp. ùkwù;
mmanụ aṅụ - 5 ml.
Brew herbs na mmiri esi mmiri, na-esi ọnwụ 40 nkeji.
Nye ihe ngwọta ahụ, gbakwunye mmanụ citrus na mmanụ aṅụ.
Gwakọta ihe niile.
Ghichapu ude mmiri n'ụtụtụ na mgbede.
Mmiri, na-ebelata ihe
Ihe kachasị mma nke ngwaahịa ahụ a kọwara na ya bụ mmemme ya ozugbo na mmetụta dị mma. Ọ gaghị ekwe omume ịmepụta ọbara ahụ n'onwe ya iji belata pores buru ibu na ihu. Iji mezuo ihe ndị dị elu na-agaghị ekwe omume, ọ ga-abụrịrị na ị ga-achọpụta ihe ịchọpụta ihe site na onye nrụpụta ọrụ.
Ụzọ kacha mma ị ga-esi kọwaa pores na ihu gị:
Estée Lauder Echiche Idealist Na-edozi Skin Refinisher;
Ngwọta Ngwá Ọrụ Ntucha nke Clininique;
Ngwurugwu Na-eme Ka Ọ Dịkwuo Mmiri;
Na-emezi ihe ọma.
A cream na narrows na pores
Ụdị nchacha a na-enyere aka imetụta mmetụta nke ngwaahịa ndị gara aga ma nye akpụkpọ ahụ na ọdịdị nke ọma n'oge niile. Akara dị mma, na-ebelata pores na ihu gị, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ụdị ndị a:
Ọ bụ Skin Clinical Solutions Pore Cream;
Dior Hydra Life nso-elu;
Of efe Wonder Cream Were Tightening & Refining;
Epieu Nkume Pep na-eri obere ude;
Dr. Brandt Pores Enweghị Mmetụta Dị Mkpa;
E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-esiwanye ike bụ ndị a na-eji eme ihe na mpaghara. Ha na-enyere aka idozi nsogbu nke ụzọ isi kpoo pores na imi na mpaghara T. Ngwa mma:
Mgba Black Clean Up Pore;
Vichy NormaDerm Hyalu;
Igodo Ntuchi Na - enweghị Isi;
Akwụsị nke Urban na-enweghị ntụpọ.
Kedu otu esi belata pores n'ime ulo?
Mgbe ụfọdụ, nlekọta ahụike adịghị enyere aka nweta mmetụta a chọrọ. N'ọnọdụ dị otú a, ọ dị mkpa ịhọrọ usoro ntinye maka ịkụzi ihe ndị dị na ihu. Mgbe 5-15 sessions, na-adabere na ịhọrọ nhazi, a ga-akpọ ya ma nwee ike. A ghaghị imegharịrị ọmụmụ ihe ugboro ugboro, n'ihi na akpụkpọ ahụ na-agbatị ma laghachi na ala mbụ ya.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji wepụ pores ndị toro eto, ọgwụgwọ nwere ike ịbụ n'ụdị usoro ndị a:
Glycolic, acidic, chemical, enzymatic na ndị ọzọ ụdị peeling;
microcurrent na ultrasound ọgwụ;
ion na phonophoresis .
Nlekọta Skin Care
Na mgbakwunye na ọgwụgwọ pụrụ iche, nsogbu a na-achọ ka mmejuputa nke usoro iwu kwa ụbọchị. Enwere ike imechi ma ọ bụrụ na a na-enye onye ahụ mgbe niile:
Ọkpụkpọ mmanu na pores buru ibu
Site n'iji ọrụ ndị ọzọ na-emepụta ihe dị iche iche, ị ga-ahọrọ ihe ịchọ mma pụrụ iche pụrụ iche. Ọ ghaghị ịhazi mmepụta nke sebum, mana egbula nkụ. A na-ahụkarị ihe ndị pores dị na ihu, ma ọ bụrụ na ha nwere "njuputa". Pọpịa sebaceous na-eme ka oxidize ma ghọọ ọkụ, n'ihi ya, ọ dị mkpa iji ihu dị ọcha na-arụ ọrụ dị ọcha. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhapụ ịmecha ahụ ike, karịsịa na mmanya na ncha.
Ntụziaka a tụrụ aro:
Usoro a na-eme kwa ụbọchị (ụtụtụ na mgbede) - ịsacha, nhicha ọcha, toning, ojiji nke ọbara. Tupu itinye ihe etemeete, tinye ude maka akpụkpọ anụ na ebuba buru ibu. Ngosiputa Ngwa na acids (AHA, BHA) na retinol.
Ịkpọ nkụ 1-3 ugboro n'izu. Oge ole na ole na-adabere na mmetụta nke epidermis.
Masks dị 8-12 ugboro n'ọnwa.
A na-eme ihe eji eme ihe n'oge ọ bụla n'ụbọchị 7-14 (ma e wezụga maka nhicha ngwaọrụ).
Acha akpụkpọ, pores dilated
Ndị nwe mmiri dehydrated epidermis kwesịrị iji moisturize ihu. Mmiri na-erughị ala n'ime akpụkpọ anụ ahụ, na-arụsi ọrụ ike n'olulu mmiri ahụ. N'ihi nke a, mgbe mgbe, ọ na-ejikarị pores na-arụ ọrụ na imi na mpaghara T-dịka ya na ebe ndị ahụ na-egbuke egbuke dị n'egedege ihu na cheeks. Ụmụ nwanyị ndị nwere akpụkpọ akpụkpọ ekwesịghị iji ihe ịchọ mma na mmanya na-aba n'anya, nnukwu elebara acid, mmanụ ndị dị mkpa na ihe ndị ọzọ na-eme ihe ike.
Nlekọta kachasị mma:
Na-asacha na ihe dị nwayọọ (ụfụfụ, gel), toning, moisturizing na nri miri emi na enyemaka nke a ude.
Ọ bụghị ihe karịrị 1 oge kwa izu. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịzụta ihe mgbakwunye na ihe microscopic, ọkọlọtọ ọkọlọtọ agaghị arụ ọrụ.
Ihe nkpuchi si na pores di iche na ndi ocha na nri, tinye ugboro iri abuo n'izu.
Dịka usoro ihe eji eme ụlọ, ọ ka mma ịhọrọ ntanye nwayọ, ịkwụsị ịkpụcha, ntanye na ụdị nhicha dị iche iche.
Ejikere maka akpụkpọ anụ buru ibu
Ọtụtụ ihe ịchọ mma eji achọpụta ihe na-eme ka nkwarụ dermatological a kọwara. Ọ bụrụ na enwere nnukwu nnukwu pores na ihu, ụfọdụ ude mmanụ "na-ada" na ha, ihu na-eme ka ọbụla dịkwuo ukwuu. Iji gbochie ọnọdụ nke mmetụta a, ị ga-ebu ụzọ tinye isi ihe pụrụ iche na ihu gị, dịka ọmụmaatụ:
Rite Uru POREfessional;
Maybelline New Skin Skin Na-ehichapụ ngwa ngwa.
Mgbe a na-etinye isi ala BB ma ọ bụ ntọala kwesịrị ekwesị maka akpụkpọ ahụ na pores buru ibu. Nhọrọ nhọrọ:
Ntucha Ngwọta Ntucha Ntucha Ntuzi Nzuzo Na-edozi Mmezi;
Holika Holika Sweet Cotton Cover Cover BB;
Maybelline Fit Me! Ezigbo + Nzuzo;
Ọrụ ebube Lancôme.
Bee butter maka ihu
Mkpụrụ ọgwụ si acne na ihu
Ngwongwo ihe eji eme ihe na ulo
Mkpụrụ anya nkuchi na eri
TSA ọ na-achọ ịmalite ime ihe dị ize ndụ ma ọ bụ ụzọ kasị mma isi mee ka akpụkpọ ahụ dịghachi?
Kedu ka esi kpoo pores n'imi?
Ntucha ihu ihu akwụkwọ
Ghọta na glycerin maka ihu - 7 Ezi ntụziaka nke ga-agbanwe akpụkpọ gị
Ezigbo mmanụ lemon maka ihu
Megan Fox gbara alụkwaghịm
Ahịhịa tii na-enyere aka idalata?
Ọnụ ụzọ aluminom
Ndị na-enwu ọkụ n'oge okpomọkụ
Kandụl na-esi ísì ụtọ - ịhịa aka n'ahụ
Katie Holmes mere obere ntutu isi ya
Ogbugbu na akpịrị ikpere - ihe ị ga-eme?
Akwụkwọ na iko ọnụ ụzọ
Gwa na genyantema
Tweets maka ndị na-eto eto
Ihe bara uru kachasị mma
Ntuchi maka ntutu isi
A ga-esi na Sotheby si ọkpụkpọ ọlaedo Kate
Ụdị ejiji nke oge a - nkọwa nke ejiji ejiji
Nwa osisi maka ákwà mgbochi
Zoo na Tallinn
Gịnị kpatara nrọ nke ikpochapu ala na broom?
Gịnị mere ndị mmadụ ji atụ egwu spiders?
Kedu ka esi mee ka ihu dị ọcha?